Fehezo ny mozika Mac anao avy amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Fehezo ny mozika Mac anao avy amin'ny Apple Watch vaovao anao
Peter Rhodes | | Apple, Apple Watch, About us, Solosaina Mac
Kely ny banga amin'ny Apple Watch hamidy any Espana, na izany no tadiavinay. Mety ny 8 Jona ho avy izao ao amin'ny Keynote voalohan'ny WWDC 2015 Tim Cook no hizara amintsika vaovao momba ny tontolon'ny paoma fa koa tonga amintsika ny Apple Watch.
Na dia ny Apple Watch Tsy namidy tao amin'ny firenentsika izany, tsy mijanona ny fampahafantaranay anao ny vaovao izay nanjary fantatra amin'ny lafiny fampiasa rehetra ananany. Amin'ity tranga ity dia hampianatra anao izahay fehezo ny famakiam-boky mozika iTunes amin'ny alàlan'ny fampifangaroana azy amin'ny Mac.
Hatramin'ny nanolorana azy dia nilaza taminay i Apple fa ny Apple Watch dia ho lasa be mpampiasa ary miaraka amin'izany no ahafahantsika mampiasa rindrambaiko an'arivony maro izay havoakan'ny mpandrindra ivelany sy Apple ary i Apple mihitsy. Ireo fanambarana rehetra ireo dia nivadika ho marina ary vantany vao namidy ny Apple Watch Efa nisy maherin'ny 3500 ny fisoratana anarana azo, izay tsy mitsaha-mitombo isan'andro.
Apple amin'ny lafiny iray ihany koa dia nahatanteraka fa ny Apple Watch dia azo ampifandraisina amin'ny Mac antsika hahafahany manao hetsika sasany toy ny, ohatra, mifehy ny mozikan'ilay Mac misy antsika ao amin'ny iTunes. Ho an'ity, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ampifanaraho amin'ny Mac ny famantaranandro izay hanarahanay ireto manaraka ireto:
Manana ny Mac sy ny iPhone amin'ny WiFi iray ihany, hatramin'ny Apple Watch dia hisintona ny WiFi amin'ny iPhone.
Ankehitriny dia manokatra ny fampiharana Remote amin'ny Apple Watch izahay.
Raha vantany vao misokatra ny fampiharana Remote dia angatahina izahay hampifandray fitaovana iray izay hikitihanay "Manampia fitaovana".
Ankehitriny dia anjaran'ny Mac, izay hidirantsika iTunes ary tsindrio ny bokotra fanaraha-maso.
Amin'ny fanaovana izany amin'ny Apple Watch Kaody miisa efatra no hiseho fa tsy maintsy ampidirintsika ao anaty iTunes hampiarahantsika azy.
Ankehitriny ianao dia afaka mifehy ny playback ny hira ao amin'ny iTunes famakiam-boky amin'ny fanaraha-maso tena tsotra. Ankehitriny, amin'izao fotoana izao, tsy misy azo atao ny mikaroka hira amin'ny anarany avy amin'ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Fehezo ny mozika Mac anao avy amin'ny Apple Watch vaovao anao
Alexander Villarroel dia hoy izy:
Ahoana ny fomba anaovana azy ao amin'ny Mac OS Catalina? tsy manana iTunes izany; ary amin'ny app Music dia tsy hitako ny bokotra fanaraha-maso.
Valiny tamin'i Alejandro Villarroel
Ahoana ny fomba hanamboarana ny feon'ny fampandrenesana amin'ny iOS amin'ny Jailbreak
Ho avy ny faran'ny OS X Yosemite 10.10.4